Los Caballos del Vino: waxaan ka hadlaynaa taariikhdeeda iyo damaashaadkeeda | Fardaha Noti
Los Horses del Vino waa xaflad lagu xuso Caravaca de la Cruz (Murcia) taariikhaha May 1 iyo 2. Dabaaldeggan, oo caan ka ahaa sanadihii la soo dhaafay, ayaa loo dabaaldegaa inta lagu guda jiro Dabaaldegyada lagu maamuusayo Santísima iyo Vera Cruz oo soconaya laga bilaabo 1da May ilaa 5ta
Waa oo ay soo qabanqaabiyeen Kooxda Fardooleyda Khamriga, federaal ka kooban lixdan urur oo loo yaqaan "peñas caballistas". Kuwaas Peas wuxuu ka qeyb galaa fardahooda seddex tartan: kan ah Fardaha Barebackee Laydhka iyo Shaqo Waxaan dareemayaa kan dambe, midka loo dabaaldego subaxa May 2, kan ugu caansan uguna caansan.
Ma wax yar ayaan ka ogaannaa waxa ay ka kooban tahay xafladdan la xiriirta sinnaanta?
Bandhiga weyn ee magaalada Caravaca de la Cruz sannadba sannadka ka dambeeya wuxuu soo jiitaa booqdayaal badan oo adduunka ka socda. Sanadihii la soo dhaafay, tiro ka mid ah in ka badan 100.000 oo qof.
1 Taariikhda Fardaha Khamriga
2 Fardaha Khamriga
2.1 Tartanka faraska bareerka ah
2.3 Tartanka Khamriga Khamriga
Taariikhda Fardaha Khamriga
Asal ahaan xafladda ayaa lagu qasi jiray taariikhda iyo halyeeyga. Dhaqanku wuxuu leeyahay marka qalcaddii Templar ee Caravaca waxaa hareereeyay Granada Moors qiyaastii 1250, Waxaa yimid xilli aysan kaydadku siinin wax ku filan oo qof walba la siiyo. Koox ka mid ah Knights Templar ayaa go’aansaday inay ka gudbaan goobta Muslimiinta iyagoo raadinaya biyaha la doonayo.
Markii ay biyo heli waayeen ayay khamri cabeen harag ku yaal dhabarka xoolaha waxayna dib ugu carareen inay cadawga ka dheereeyaan iyo xayndaabka loo diyaariyay agagaarka Qasriga. Markii ay soo noqdeen waxaa lagu soo dhoweeyey farxad, waxaa loo tixgeliyey geesiyaal iyaga oo ka badbaadinaya xaaladda ay ku sugan yihiin. Knights iyo fardooleydoodii waxaa lagu sharraxay khamiisyo qurux badan oo daabac leh iyo ubaxyo ubaxyo.
Horaantii 1231 qalcaddii ay ku soo laabteen nimankan, Relic of the Holy Cross waa la ilaalinayay.
Tan iyo qarniyadii dhexe way dabaaldegeysay xafladan oo dib u xasuusineysa muuqaalka kooxda Knights Templar. Waqtiyada qaar xafladdu way ka qurux badnayd kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, maahan illaa iyo Qarnigii XNUMXaad markii xisbigu si rasmi ah loo qaabeeyey, sannado ka dib mar hore oo buuxa Jacaylka, xafladda ayaa la dhisi lahaa Jidka maanta inagu soo gaadhay.
En 1959 ayaa dib loo cusbooneysiiyay xafladaha tan iyo intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye iyo xilligii dagaalka ka dib, waxaa loo dabaaldegi jiray sida ugu wanaagsan Waxay ahayd taariikhdan markii la abuuray kooxo Moors iyo Masiixiyiin ah, marka lagu daro inbadan oo peas ah oo wali ka qayb qaadanaya dabaaldega. Dharka ay xidhaan Fardaha Khamrigu sidoo kale waa la cusbooneysiin doonaa.
Laga soo bilaabo tixraacyadii ugu horreeyay ee dukumiintiyada, laga soo bilaabo qarnigii toddoba iyo tobnaad, dabbaaldegga ayaa u beddelay sida loo muujiyey maanta. Maanta waxay ka kooban tahay saddex tartan halkaas oo xoog, qurux iyo shucuur lagu qiimeeyo: Tartan faras qaawan, tartanka ka-hortagga iyo tartanka tartanka.
Tartanadaasi waxay dhacayaan May 1 iyo 2. Laakiin sidoo kale, 3-da yar yar ayaa ka qayb geli kara xafladda iyagoo leh feydo taas oo ka dhigan Kooxda Fardaha Khamriga.
Tartanka faraska bareerka ah
Dabaaldega Los Caballos del Vino iyo xafladda lagu sharfay Quduuska iyo Vera Cruz, bilaabmaa 1-da May, oo fardaha loo qaadayo wadada si loo qiimeeyo qaab dhismeedkooda. Faraska waxaa lagu muujiyey maalintan koowaad sida ugu wanaagsan ee dabiiciga ah, nidaamsan, si fiican loo cadaystay si timuhu u dhalaalaan. Ragga jilicsan ama tidcan ama timo kale oo dhagaxu go'aansado.
Waa la sameeyaa marka hore dhoolatus ay dhagaxyada ku muujinayaan fardahooda, qaar waxay ka dhigaan kuwo gallooda halka kuwa kale ay si deggan ugu socdaan si quruxdooda loo qadariyo. Intii lagu guda jiray safarkaas wuxuu sameeyaa imtixaan gaaban oo tartanka ah oo dhici doona maalinta xigta.
Dhamaadka dhoolatuskan, ka garsoorayaasha Kooxda Koobka Fardaha Khamriga, waxay tilmaamayaan fardahaas taagan sanadkan koobabna waxay siiyaan digir guuleysta.
Kadib fardaha ayaa laga qaadayaa wadooyinka si ay ugu nastaan ​​xeryahooda ama beerahooda.
Timaha Timaha waxaa la qabtay ilaa 1980, oo quruxdii iyo faraskii fardaha ayaa lagu qiimeeyaa. Ma jiraan sharciyo, sidaa darteed xulashada guuleystayaasha waxaa iska leh go'aanka xeerbeegtida.
The Peñas ee aadka u soo baxay waxay ahaayeen Zuagir, Mudacid, Terry iyo Chirinos, kan labaadna waa kii guuleystay lix sano oo xiriir ah.
Maalintii labaad ee xafladda wuxuu bilaabmaa aroorta hore dhaqida iyo xirashada faraska in kabadan afartan goobood oo kaladuwan magaalada. Dhaqankani wuxuu badanaa leeyahay daawadayaal yar, oo ka baxsan kuwa lala xiriirinayo naadiyada 'caballistas' ama qoysaska magaalada. Intaas ka dib, farduhu waxay la wareegaan jidadka magaalada iyo tartanka caanka ah ee Los Caballos del Vino ayaa dhacaya.
Harnessing waxaa ku jira labadaba naqshadda dharka iyo harqaanka iyo daabac oo ku saleysan xariir, rhinestones iyo dahab iyo qalin qalin. Khamiisku wuxuu ka kooban yahay siddeed iyo toban xabbo: khayaanada madaxa, baalasha taajkeeda taaj, laba jaakad oo lagu sharraxay xarigyo midabbo leh, laba ramaaras, calanka, laabdhawrka, laba kalluun, laba buste, laba dhejis, dabada iyo laba silsilado gacmaha. Dhammaantood waxaa lagu dhejiyay tassels iyo jalma halka ay gogoashu ku xiran yihiin.
Kaliya maaha dharka uu farasku xidho waa la qiimeeyaa laakiin soo bandhigidiisa ku saabsan xayawaanka, iyadoo la qadarinayo iswaafajinta xayawaanka iyo dharkiisa. Muhiimadu waa sida farasku ugu ekaado dharkiisa una ilaaliyo degenaanshihiisa maalintii oo dhan.
Dukumiintiyada ugu da'da weyn ee la keydiyey ee ka hadlaya qurxinta Los Caballos del Vino waxay bilaabeen qarnigii XNUMXaad.
Bilowgii, Fardaha Khamriga Waxay ku labisnaayeen dharka gogosha, manila shawls ama trousseau ee aroosyada. Hadhow dayactirka ee dhinacyada, dhar khaas ah ayaa la bilaabay in la sameeyo fardaha. Shaqada daabacaadlayaasha iyo nashqadeeyayaasha dharka shubka ayaa bilaabay inay kasbadaan ilaa iyo inta si fiican looga aqoonsaday magaalada. Go ’kasta, taas oo waxaa lagu xardhay xariir iyo dahab, waxay qaadan kartaa sanad dhan in la sameeyo oo ay ku baxday kumanaan yuuro.
Tartanka Khamriga Khamriga
Tartanka Khamriga Wine wuxuu leeyahay dad badan oo raacsan oo caan ah, waa tartanka ugu caansan gudaha xafladaha waaweyn ee Caravaca de la Cruz.
Waxaa loo uuraystay sida tijaabo waqti ah oo ay farduhu ku tartamaan naadiyada kala duwan ee 'caballistas' ee ka qeyb gala dabaaldegga. Faraska waxaa weheliya afar fardooley ah oo la ordaya xayawaanka dushiisa waxa loogu yeero "Cuesta del Castillo". Aynu daawano fiidiyow mid ka mid ah tartamadan ka hor inta aynaan u sharraxin tartankan si qoto dheer.
Xayawaanku waxay fuulaan “La Cuesta del Castillo”, fogaan ah 80 mitir oo foorar ah 14%, keydinta dhibic dhan 11 mitir.
Tartanka, fardihii, mid mid baa loo orday, oo ay la socdaan afarta fardooley, laba hore iyo laba gadaal, weheliya xayawaanka isaga ku dheggan Haddii midkoodna la sii daayo kahor intaysan ka gudbin xariiqda dhamaadka, baabi'intu way dhacdaa faraskaas.
Tartanku waxaa lagu soo koobay nidaamyo horumarsan, laakiin waqti ka dib cabbiraadda gacanta oo calanku ku socdo ayaa bilowgii la adeegsaday. Farxiyayaashu dhagaystayaashoodu waxay sidoo kale u adeegeen nidaam cabbiraad hore.
Waqti dheer ka hor waxaa lagu abaalmariyay lacag caddaan ah, hase yeeshee maanta, waa dhiirigelinta in marka hore la yimaado iyo hanka la yimaada taas oo dhiirrigelisa ka qaybgalayaasha.
Dhamaadka tartanka, ee qorshaha 'Real Basilica Santaurio', koobabka qaybaha kala duwan ayaa la siiyaa.
Taariikhda saxda ah ee goorta ay tartamahani bilaabmeen lama yaqaan, in kastoo ay Markhaatifurka afka ayaa horey uga hadlay bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad, laga bilaabo halkii mar kasta oo ay xididdo badan lahayd. Laga soo bilaabo 1894 waxay bilaabeen in lagu xayaysiiyo barnaamijyada xisbiyada qaarkood iyaga oo u qalma inay yihiin dhaqan, taas oo noo sheegaysa inay horeba ugu jireen waqtigaas.
Dhaqan ahaan isla fardaha ayaa loo isticmaali jiray sidii hawlaha beeraha. Waxay ka imaan laheyd 1960 markay bilaabayaan xulashada xoolaha, iyo inay ku takhasusaan shaqadan: jimicsi, cunto iyo daryeel. Si la mid ah, fardooleydu waxay bilaabeen tababarka sanadka oo dhan sidoo kale.
Sannadihii ugu dambeeyay, natiijooyinka tartamada waxaa hoos loo dhigay illaa 7 ilbidhiqsi, wax aan suurta gal ahayn haddii aan tababbarka iyo waqtiga la gelin fardooleyda iyo fardahooda sannadka oo dhan.
Xamaasad ahaan, waqtiga ugu wanaagsan ee la diiwaangeliyey wuxuu ahaa 7 sekan iyo 713 kun, oo ay gaareen Peña Artesano sanadkii 2016.
Dabaaldegaan waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan uguna wakiilka ah Caravaca de la Cruz. Daaran 2004, Xafladihii Sharafta lahaa ee Santísima iyo Vera Cruz waxaa looga dhawaaqay Xiisaha Dalxiiska Caalamiga oo si gaar ah u dabbaaldegga Fardaha Khamrigu waxay ku haminayaan in Unesco ay ku dhawaaqdo Dhaxal-dhaqameed aan la taaban karin oo Bani-aadamnimo
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Fardaha Khamriga: taariikhdooda iyo dabaaldegooda